Ukulungiswa kwenyama kanye ne-Vacuum Packed Shipping - I-Bonanno Butcher
Kuvaliwe: NgoMsombuluko nangoLwesibili Ntambama
Kusukela ngoMsombuluko kuya ngeSonto:
Ukulungiselela inyama nenyama epakishwe ngemishini Macelleria Bonanno
Bonke ubuhle benyama yangempela buthunyelwe ekhaya.
La inyama della UBonanno Butcher kungokoqobo futhi kulawulwa kakhulu ongakujabulela uma ungaphakathi Messina endaweni Provinciale. the UBonanno Butcher ikunikeza i ukusikeka di inyama okubaluleke kakhulu, amalungiselelo we-gastronomic ukulungele ukuphekwa e inyama di ukukhetha kokuqala, nethuba lokusebenza kwe umshini phama lokuthumela in yonke i-Italy.
Ukulungiswa kwenyama nokuhanjiswa okupakishwe kulo lonke elase-Italy: ubuhle beBonanno Butcher kusuka eMessina kuya kulo lonke elase-Italy
Inyama yangempela kusuka emapulazini alawulwayo, amalungiselelo we-gastronomic ilungele ukugcinwa futhi ingathunyelwa vacuum inyama egcwele in yonke i-Italy. the UBonanno Butcher di Messina impela uyakwazi ukuthatha amakhasimende akhe ngomphimbo. THE ukusikeka di inyama ukukhetha kokuqala kungenye yamandla we Isitolo sikaButcher, ebilokhu inikela iminyaka manje inyama yenkomo, izingulube, imvu, Inyama emhlophe, isoseji, i-hamburger, inyama ebandayo kanye noshizi endlunkulu yayo, esendaweni Provinciale di Messina.
Ingulube Loin, Veal, iWundlu kanye nama-Messinesi chops akhethekile: amalungiselelo enyama amnandi athunyelwa kulo lonke elase-Italy
Uthando olwedlula iminyaka engama-30 yomsebenzi, njalo ngokuzinikela okufanayo nokuseshwa okufanayo kokuhle nokwangempela. Uzothola konke lokhu nokuningi kufayela le- ukulungiselela inyama futhi ukusika kokukhetha kokuqala okuhlongozwe ngu UBonanno Butcher. the amasoseji ayatholakala lapha kuma-flavour amaningi ahlukene, kanye ne- i-hamburger futhi kwaziswa kakhulu I-Messina chops. the Isitolo sikaButcher kuyigugu futhi salumeria nge-assortment enkulu yama-hams, i-Salami e lisikiwe yomkhiqizo wasekhaya nowazwelonke.
I ukulungiselela inyama okuhlongozwe ngu Isitolo sikaButcher kuzokuvumela ukuthi ulethe etafuleni kuphela ubuhle bokudla con inyama yokuqala yokukhetha eqhamuka ezilwaneni ezikhuliswe amapulazi aphephile. I Izinkomoi izinkukhu, i amawundlui izingulube nakho konke amalungiselelo enyama zivela kumaketanga okuhlinzekwa nokulawulwa. Kusuka ku- UBonanno Butcher Nginakho kuphela inyama elawulwayo, ngokomthetho, obonakala ngezinga eliphakeme kakhulu lobuqiniso, ubusha nobuhle obuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo.
Ikheli: Nge-Siracusa (indawo yesiFundazwe), yi-14
Ucingo: 090 2930542
Umakhala ekhukhwini: 392 1655653
Ifasitela lesitolo: www.macelleriabonanno.trovaweb.net
Inombolo ye-VAT: 02596480836